Indlu yasemapulazini i-Ca Du Briccu - IFULETHI LE-LEMON - I-Airbnb
Indlu yasemapulazini i-Ca Du Briccu - IFULETHI LE-LEMON
Bardino Vecchio, Liguria, i-Italy
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Pier Luigi
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Pier Luigi izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Okt 19.
I-Farmhouse Ca Du Briccu yazalelwa e-Bardino Vecchio, idolobha elincane kumasipala wase-Tovo San Giacomo, elizungezwe izihlahla zomnqumo nezihlahla eziluhlaza. Imvelaphi yakudala namasiko asemaphandleni asaphila namapulazi amaningi endaweni.
Yindawo yokuthula nokuzola, elungele ukuchitha iholide kwenye yezingxenye eziluhlaza kakhulu nezinhle kakhulu zasemaphandleni aseduze nomongameli wase-Ligurian.
I-Ca Du Briccu Farmhouse isendlini endala yezwe elungiswe ngokuphelele kusukela ngo-2019. Inamafulethi amathathu: ama-lemon, IZIHLAHLA ZOMNQUMO nokudoba. Iyingxenye ebalulekile yepulazi elinikezelwe ekulimeni izihlahla zomnqumo. Unganambitha futhi uthenge amafutha ethu.
Amafulethi anefenisha anesitofu esishisayo, ifriji, umshini wokuwasha izitsha, umshini wokuwasha, ithelevishini, i-air conditioning, okokushisisa, umshini wokomisa izinwele, ilineni ne-Wi-Fi yamahhala. Isidlo sasekuseni singabhukhwa endlini ngemva kokungena.
ubusuku obungu-7 e- Bardino Vecchio
Akuyona nje indawo ekahle kulabo abafuna ukuthula nokuxhumana nemvelo, kodwa nalabo abathanda iholide eligcwele imidlalo. Indawo ingaphakathi elimangalisayo futhi inikeza amathuba amaningi kubathandi be-MMTB, imizila edumile ye-Val Maremola ne-Finalese enyuka isuka eningizimu-ntshonalanga ye-Colle del Melogno ukuya e-Manie, nayo eyindawo enhle kakhulu yokubuka nemizila yabathandi bokuhamba ngezinyawo nokuqwala izintaba. Ulwandle luqhele ngamakhilomitha angaba ngu-6, i-Finale Ligure nedolobhana layo elidumile lase-Varigotti, i-Final Borgo, enye yezindawo ezinhle kakhulu e-Italy nase-Pietra L figure, idolobha le-Blue Flag ngo-2018/2019, inikeza amabhishi anamaphupho nezikhungo ezinhle zomlando.
Endaweni kunemigoqo eminingi, ama-trattorias nezindawo zokudlela, lapho isiko lokudla kwase-Ligurian lijabulisa kakhulu, ungakwazi ukunambitha amadombolo, i-pesto, i-reminata yezinkukhu ezihlanganiswe namalebula e-lava, i-vermentino newayini le-rossese.
Ibungazwe ngu-Pier Luigi
Hlola ezinye izinketho ezise- Bardino Vecchio namaphethelo